ညီနေမင်း: window7အတွက် Driver မလိုပါ
မေးတာလဲ လူတိုင်းနီးပါးပါပဲ . ကျွန်တော်လဲ မထူးဘူးဆိုပြီး ပို့စ်တင်လိုက်ပါတယ် . window7ရဲ့ အားသာချက် တစ်ခုထဲမှာ driver အတွက် တင်စရာမလိုလို့ပါပဲ . ဘယ် PC ပဲဖြစ်ဖြစ် VGA driver, sound driver, motherboard driver နဲ့ အခြားအခြားသော driver များကို မလိုအပ်ပါဘူး . driver ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူများ . driver cd မရှိသူများ . လက်ရှိရှိနေတဲ့ driver cd များကို အမှိုက်ပုံးထဲကို ပစ်ထည့်လိုက်လို့ရပါပြီ. window7ဟာ driver auto detact ပါ . တစ်ကယ့်ကို ဆရာကျတယ်ဗျာ . လူတိုင်းနီးပါ crazy ဖြစ်ကြတဲ့အထဲမှာ driver မလိုအပ်တဲ့ အချက်ကလဲ တစ်ချက်ပါတယ် . ပြီးတော့ သူ့ရဲ့အပြင်အဆင်ကလဲ တစ်ကယ်ကို လှပတယ် . ပေါ့ပါးလာတယ် . အင်တာနက်သုံးတာ ပိုပြီးမြန်ဆန်လာတယ် . အင်တာနက် အသုံးပြုတဲ့အချိန် မြန်ဆန်မှုထဲမှာ browser ကလဲ တစ်ခန်းတကဏ္ဍပါဝင်ပါတယ် .7သုံးတဲ့သူများတွေဟာ အခုဆိုရင် ကမ္ဘာမှာ ခဏလေးနဲ့ကို လူတိုင်း နီးပါးဟာ window xp ရဲ့ အားနည်းချက်နဲ့ vista ရဲ့ အဆမတန်နေရာ ယူမှုတွေကို စွန့်လွှတ်ပြီး window7ကို ဖက်ကို လုံးဝကို ခုန်ကူးလာကြတာဟာ window7ရဲ့ စွဲဆောင်မှုအားကောင်းတဲ့ အချက်တွေကြောင့်ဆိုရင်လဲ မမှားပါဘူး .
Posted by ညီနေမင်း at 9:02 PM
cat November 2, 2009 at 4:10 AM
window 7တင်ဖို့ ကျွန်တော့်ရဲ့ hardware ဆရာက video editing software တွေနဲ့ မကိုက်ဖူးလို့ ပြောတယ်အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲခင်ဗျ။ကျွန်တော်ကpremiere pro2သုံးပါတယ်။
myothant November 6, 2009 at 7:36 AM
window7အတွက် driver က Laptop မှာဆိုရင် အဆင်ပြေနိုင်ပါ့မလား အကို ကျွန်တော်က ကွန်ပျူတာဆိုင် တခုမှာ အလုပ်လုပ်နေတာပါ Laptop မှာ window7တင် ချင်ရင် အရင်ဆုံး vista တင်ပြီးတော့ driver ရှာ ပြီးမှ window7တင်နဲ့ အချိန်တော်တော်ယူရပါတယ်. အဲ့ဒါ ဘယ်လိုအဆင်ပြေနိုင်မလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်. ကျွန်တော်လဲ Laptop တလုံးကို window7တန်း တင်ပြီးတော့ မစမ်းရသေးဘူး ကျွန်တော် စမ်းကြည့်ပါအုံးမယ်. တချက်လောက် ပြောပြပေးပါအုံးနော်
lynn November 10, 2009 at 8:13 AM
အဲဒါတင်မကဘူးထင်တယ်...Format ချရတာလည်း မြန်သလားမမေးနဲ့... ဖြတ်ခနဲပဲ
RapStaRkOkO January 3, 2012 at 5:19 AM
ကိုညီနေမင်း...ကျနော် နာမည် (ရာရာ) ပါ ကျနော် ကို ကူညီပါ... :)
ကျနော်လေ အရင်ကသုံးနေတဲ့ Firefox ကထစ်နေလို့ ထုတ်လိုက်တယ်.. အသစ်ပြန်ဒေါင်းပြီး Run လိုက်ရင် Password တောင်းနေတယ်....ဘယ်လို့မှ Run လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်.. ကျနော်လဲ ရလို ရညား စမ်း Run တာ အခါတစ်ရာ ပြည့်တော့မယ်...အခုချိန်ထိ မရသေးဘူး... ဘယ်လို Run ရင် ရနိုင်မလဲ.. အရမ်းကို လိုအပ်နေလို့ ကူညီပေးပါ... :) rapstarkoko@gmail.com ကို mail ပို့ပေးပါနော်... PlZ...